Shiinaha YF-HY-2 11 khaanadaha oo aan lahayn muraayad Soosaara iyo Soo-saare | Yifan
Maalmahan, miisaska wax aan waxba tarayn ayaa ku tartamaya alaabada guryaha ee qiimaha sare leh ee ku saabsan qiimaha. Qofna ka hor istaagi maayo mid ka mid ah inuu helo haddii aad awood u leedahay inaad ku bixisid wax aan fiicnayn. Haddii ay dhacdo inaad hadda raadineyso wax aan waxba tarayn, waxaan ku faraxsanahay inaan muujiyo laba ikhtiyaar.
Maalmahan, miisaska wax aan waxba tarayn ayaa ku tartamaya alaabada guryaha ee qiimaha sare leh ee ku saabsan qiimaha. Qofna ka hor istaagi maayo mid ka mid ah inuu helo haddii aad awood u leedahay inaad ku bixisid wax aan fiicnayn. Haddii ay dhacdo inaad hadda raadineyso wax aan waxba tarayn, waxaan ku faraxsanahay inaan muujiyo laba ikhtiyaar. Iibso muraayad darbi oo fadhiiso sidoo kale miis raaxo leh oo raaxo leh. Taasi waa taas in waxtarkaaga khiyaaliga ahi uu raagayo. Ta labaad, soo iibso mashiinka wax lagu qurxiyo ee keydkiisu xadidan yahay ama soo iibso weel caag ah oo yar yar oo ka wada faa'iideysta wax aan jirin
Ma inaad wax ka qabataa dhibaatooyinka booska ka jira gurigaaga yar? Weligaa waligaa ma rabtay koone kuu gaar ah? Ma u baahan tahay meel badan oo aad ku kaydiso waxyaabaha la isku qurxiyo, cadarkaaga, iyo qalabka la isku qurxiyo? Waxaad tahay qof dumar ah oo waxaad dooneysaa inaad si maalinle ah u ekaato, waanan ku fahmaynaa. Taasi waa sababta aan kuu hayno jawaabta aad raadineysay! Qalabkayaga qurxinta ee geeska ayaa la yimaada muraayad saddex-laab ah oo adiga kuu ah si aad u sahamiso xagal kasta oo wejigaaga ah. Marnaba ha ka fikirin "meesha aad ku keydinaysid" waxyaalaha la isku qurxiyo mar labaad. Waxay ku imaaneysaa 11 khaanad oo ku siinaya meel ka badan inta aad u baahan tahay.
Ka samaysan alwaax cad waxay ku habboon tahay qol kasta maxaa yeelay dhammaanteen waan ognahay, caddaanku wax kasta wuu la socdaa. Naqshadeynta kaliya laga helo alaabada caymiska.
Waxbaan kaa baranay, xitaa haddaad nin tahay! Waad u iibsan kartaa xaaskaaga, saaxiibadaada ama gabadhaada. Naga aamin, waa wax lala yaabo!
Dusha miiskaaga miiska saaran khaanadaha adag ee muuqaalka oo dhammeystiran. Astaamaha 4 khaanadaha jilicsan-dhow (2x) oo lagu muujiyey goobaheena khaanadda Crystal Lux
Cabir: 150 * 60 * 80cm
Cabbirka khaanadda: 43 * 15.6 * 60cm
Muraayad leh Cabirka Saldhigga 45.75 "W x 12.75 'D x 32.5" H
Muraayad aan lahayn Qiyaasta Saldhigga 43.25 "W x 2.75" D x 31.5 "H
Midabka: Madow, caddaan, casaan qafiif ah (Waxaa laga heli karaa saxeexaya Glossy White, Pro Black, Shimmery Silver, Champagne Gold, iyo Rose Gold premium dhamaadka)
waxaan taageernaa OEM cabirkiisa iyo midabkiisaba, fadlan kala hadal adeegga macaamiisha
Hollywood soo jiidashada sharraxaadda leh qaab-dhismeedkeeda fudud ee ka dhigtay kuwa aan qurxoonayn kuwa jecel qurxinta, boggaga iyo boggaga quruxda badan ayaa jacayl ku dhaca. Ku soo biir kumanaan vanitistas faraxsan oo maalin kasta ha iftiimiso!
Hore: YF-HY-1 13 khaanadaha
Xiga: YF-HY-3 3 khaanado
Crystal Hollywood Glow Faan
Muraayada Hollywood-ka ee Vanant Mirror
Muraayad Faan ah Hollywood oo leh Nalal
Saldhigga Waxtarka Hollywood
Jadwalka Waxyaabaha Faa'iidada ah ee Hollywood
Qaab Casri ah Hollywood Muraayadaha Qurxinta Waxyeellada